Diyaarad Siday Gargaar Oo Lagu Rasaaseeyey Gobolka Baay Iyo Faah faahino ka soo baxaya | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Diyaarad Siday Gargaar Oo Lagu Rasaaseeyey Gobolka Baay Iyo Faah faahino ...
Diyaarad Siday Gargaar Oo Lagu Rasaaseeyey Gobolka Baay Iyo Faah faahino ka soo baxaya
Wararka ka imaanaya degmada Qansaxdheere ee gobolka Baay ayaa sheegaya in diyaarad gaar ah oo siday gar gaar maanta rasaas lagu furay xili ay dooneysay in ay ku degto garoonka diyaaradaha Qansaxdheere.
Sida aan wararka ku helnay kooxo aan wali heebtooda la shaacin ayaa diyaarada rasaas ku furay xiliga ay dageysay, waxaana wararka aan helnay sheegayaan in qaar kamid ah rasaastaasi ay ku dhacday diyaarad balse aysan waxyeelo gaarsiin.
Diyaarada ayaa rasaasta kadib kasoo duushay degmada Qansaxdheere iyadoona kusoo laabatay magaalada Muqdisho, lamana oga wali cida rasaasta ku furtay diyaaradaasi, mana jiro wax war ah oo kasoo baxay maamulka Koonfur Galbeed.
Weerarkan diyaarada gar gaarka waday lagu qaaday ayaa kusoo aadeysa xili dhawaan diyaarad ay leedahay shirkada Afrikan Airways lagu soo riday degmada Bardaale kadib markii ciidamada Itoobiya gantaal ku dhufteen.
Previous articleDHAGAYSO:-Jubbaland oo si caro leh uga hadashay hadalkii Amb, Francisco Madeira
Next articleGolaha Wasaaradda Cusub ee Maamulka Puntland oo la Dhaariyay
SAWIRRO- Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Iyo Wafdigii u Hoggaaminayey oo Dalka dib...
Dowladda Suudaan oo ka biyo diidday hadal ka soo yeedhay Itoobiya...